အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: Everybody It's သင်္ကြန် Time!!!!!!! Let's Rock & Roll!!
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:51 PM
သင်္ကြန် သီချင်းနဲ့ လာဒန့် စ် သွားတယ် နှစ်သစ် မှာ အိပ်မက်သစ် တွေ မက်နိုင်ပါစေ
i want to see you dance... ha haha.. happy new year..... 1370...
ဘယ်အရာမဆို ပြောင်းလဲနေတဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းတရားသာ လက်ကိုင်ထားတဲ့ အိပ်မက်နက်ရဲ့ဘ၀ထဲမှာ မပြောင်းမလဲဘဲ နှစ်သစ်ရောက်တိုင်းနားထောင်တတ်တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိသေးတာ ၀မ်းသာစရာပဲနော့်... :P နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်နဲ့ အိပ်မက်လှလှတွေ မက်နိုင်ပါစေ။
သင်္ကြန်သီချင်းလေး လာရောက်နားထောင်သွားပါတယ် အကြတ်နေ့မှ ဘဲ တယ်ကတော့မယ်နော်။
I like the lyric of the song and music too thanks for sharing with us.. good choice :) Again Happy Thingyan to you.. Mi Amigo
တီချင်းလေး နားထောင်သွားသကွ...မင်္ဂလာနှစ်သစ် ၁၃ရ၀ မှသည် နှစ်သစ်ရောက်တိုင်း ဒီတီချင်းလေးကိုပဲ ဆက်လက်ပီး နားထောင်နိုင်ပါစေကွာ..း)
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာပါဗျာ ။း)
သယ်ရင်းရေ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ နော...။
Hi bro .. actually this is ...
.... RAP & Roll !!! :D